Yintoni ekhethwayo, ukuyila ngePC okanye ngeMac? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | ngokubanzi, Ezahlukeneyo
Zininzi iindlela iingxaki esijamelene nazo yonke imihla kwaye izigqibo ekufuneka sizenzile zinakho zisenze sifumane iziphumo ezilungileyo okanye ezimbi.
Xa ukhetha imveliso kufuneka sivavanye iindlela ezahlukeneyo ukuba intengiso iyasinika kunye nezo zihambelana neemfuno zethu kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Oku kuthetha ngokubanzi yinto esiyenzayo qho xa sisiya kuthenga into, nkqu nokuthenga kwethu yonke imihla kwivenkile apho sivavanya ubuhle kunye neengozi zeemveliso eziwela kuthi ekugqibeleni. Ezi ntlawulo okubaluleke ngakumbi kokukhona liphezulu ixabiso laloo ntoUkusuka kwitanki lokugcina ukuya kumatrasi okanye kwindlu, ukuthelekisa phakathi kwezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo akunakuphepheka.
1 Kodwa xa kuziwa kuyilo, khetha iPC okanye iMac?
2 Umahluko phakathi kwePC kunye neMac
Kodwa xa kuziwa kuyilo, khetha iPC okanye iMac?
Enye yezi ngxaki ivela xa sijonga ukuthenga ikhompyuter entsha yedesktop, ilungele eyethu ukuzisebenzisa okanye ukwenza umsebenzi kwaye ngulo mzuzu xa amathandabuzo esikhukula ukuba sikhethe i-PC yedesktop, ihlala isekwe kwi Inkqubo yokusebenza yeWindows okanye ukhethe ukhetho lweapile kwiidesktops zethu, iMac.
Ukuhambelana kwezi nkqubo zombini kunye neenkqubo ezahlukeneyo esizisebenzisayo mihla le kwenzeka ngenxa yokuba nganye kwinkampani ezingabazali, IMicrosoft kunye neApple zisinika iinguqulelo zeenkqubo ziqhelekile kwiinkqubo zazo.
Ezona nkqubo zikhethekileyo kwimisebenzi emiselwe ukuyilwa, umculo, njl. zilungiselelwe zombini ezi nkqubo ke asizukuba nengxaki ekhethekileyo, nangona kubalulekile ukuba sisebenzisa inkqubo ethile kwindawo yethu yokusebenza ukuqinisekisa ukuba iyafumaneka kwinkqubo esizimisele ukuyikhetha.
Los iinkqubo ezenziwe yiApple Lungiselela izixhobo zeekhompyuter ezisebenzisa ngakumbi ukuba zisebenze ngakumbi kuneenkqubo esizifaka kwii-PC ezifakwe ngeWindows kunye a inqanaba lesoftware, omabini amaqonga ajika abe yi-100% esebenzayo. Zombini iMac kunye nePC ziyahambelana neenkqubo zokusetyenziswa kwemihla ngemihla kwilizwe loyilo lwegraphic, enika abasebenzisi ithuba lokujongana nazo naziphi na iimfuno zomsebenzisi ngokufanelekileyo.
IiMacs zisetyenziswa kakhulu kwiinkampani zetekhnoloji ikakhulu eUnited States I-Windows ukhetho oluphambili lweekhompyuter zakho, nangona oku kunguhlobo oluguqukayo, nenani elikhulu labasebenzisi abakhetha ukhetho lweapile, ikakhulu ngenxa yokunyuka kweefowuni eziphathwayo, ezinabasebenzisi bazo xa betshintsha i-PC yabo bakhetha iMac ukwenza ukuhambelana ne-IPhone yakho okanye i-IPad kube lula.
Umahluko phakathi kwePC kunye neMac
Enye yeenzuzo eziphambili zePC kukuba zinokuqwalaseleka ngakumbi kunye nohlaziyo lwayo lulula kakhulu kuba uninzi lwezixhobo zekhompyuter zinokutshintsha ngokulula, into iMacs engasivumeli yona. Ngaba inqaku elithandekayo Kakhulu kufuneka sithathele ingqalelo kuba sinokwandisa ubomi bezixhobo zethu notshintsho oluthile.
IiPC ngokubanzi zitshiphu, Esinye sezizathu zokuba nokuba inkqubela phambili kwezobuchwephesha abasinike yona, siyinike ubukhulu ekuthengiseni iminyaka. IiMacs, Ukongeza kubuchwephesha basinika uyilo, into ekuthiwa zii-PC ezingayihoyiyo, iyimveliso ebeka ukubaluleka kokusebenziseka kunobuhle.
IMac isinika yonke into inye, nge Iimpawu ze-4K kunye ne-5K, ukhetho olunokuthi ii-PC ezinyusa iiWindows azikhange zikwazi ukubonelela ngomgangatho ofanayo nophawu lweapile. Esona siseko sincinci unaso Mac xa kuthelekiswa neWindows, kukuba ikwasinika izibonelelo malunga nokukhuselwa kwizisongelo kunye neentsholongwane.
Olunye uncedo lweeMacs kukuba zikhona ayinzima kangako kwaye inomdla ngakumbi ukuyisebenzisa, Into esinokuyibona kwi-IPhone nakwi-IPad. Nangona sasikade singabasebenzisi beWindows ngaphambili, emva kwexesha elifutshane lokuziqhelanisa, siza kubona ukuba ukusetyenziswa kwayo kuya kuba lula kuthi.
Oku yongeze ukusetyenziswa kwayo kuyilo, iinkqubo ezilungiselelwe inkqubo yeApple zenza ukuba umsebenzi uphelele ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyilo kunye nePC okanye iMac?
Izimvo ezi-12, shiya ezakho
Luis Carrillo sitsho
U-Baa uthetha kuphela ngexabiso ayikho enye into kwaye bendicinga ukuba bazokukhankanya isantya kunye nokusebenza kwawo omabini amaqonga
Phendula uLuis Carrillo
USusana perez pazos sitsho
Phendula uSusana Pérez Pazos
ULeonel Manzanarez sitsho
Phendula uLeonel Manzanarez
UNorberto Alonso Rodríguez sitsho
Ayinamsebenzi, ndisebenze kunye nee-IMac ezazisenza usizi, umba kukusoloko ugcina ucwangco kunye nococeko kwindawo yokusebenza. Akuncedi nganto ukuthetha ukuba i-mac isebenza ngcono ngokungaphantsi xa ibiza kakhulu kwaye ngexabiso elifanayo ufumana ipc eyenza ngokufanayo okanye ngcono.
Phendula uNorberto Alonso Rodríguez
Ngumbuzo wexabiso ngengqondo yokuba kubonakala ngathi akukho ngqiqweni ukuhlawula ngaphezulu kokuphindwe kabini kwinto eyenzayo kum. Emsebenzini sinemodeli yeMac yamva nje (malunga ne-2500 euro ukusuka kwiphiko), kuba ngaphantsi kwesiqingatha ekhaya i-PC yam inamandla angaphezulu kwama-20, yenza okufanayo kwaye iyakhawuleza kwaye i-TV yam ye-HD ye-intshi ezingama-32 ayikabikho mva. Ngendlela, ngaphambi kokutshintsha iMac (eyayilula kunokwenza isidanga sobugcisa ukubeka inkumbulo engaphezulu) ngendibhale intyilalwazi kunye nenani leengxaki eyazinikayo, ngenye imini ndaphula irekhodi ngokubeka iphepha eliphindwe kabini kwiiyure ezili-9 .... Impambano inje ukuba umhlobo wentombi yam (iminyaka eli-6 ubudala) ine-mac kwigumbi lakhe… ye?.
Ingxaki kuphela kukuba ndiyaphambana neendlela ezimfutshane xa ndisuka ekhaya ndiye emsebenzini okanye ndisiya ekhaya.
USebastian Palacio sitsho
Uyilo lwenziwe ngumntu, hayi umatshini, iziphumo ziyafana kuzo zombini
Phendula uSebastian Palacio
USandra Cristina Gonzalez Uslar sitsho
Kufana nokuthi ibrashi yenza igqibelele ... UDa Vinci akakhathali, akunjalo?
Phendula uSandra Cristina Gonzalez Uslar
USamuel Ascaso sitsho
inzulu, inqaku elibanzi nelibalulekileyo, njengesiqhelo. Ndiyakuvuyela
Phendula kuSamuel Ascaso
UAlexander Lima sitsho
Iziphumo zokugqibela, umthengi akaze aqaphele kwaye anganiki dongo ukuba uyenzile ngesiqwenga sePC ekhunjulweyo okanye ngefashoni imac. Andiyichithi kwiintsimbi ezintle, akukho namnye kubaxhasi bam oyibonayo loo nto.
Phendula kuAlejandro Lima
Uyilo olulungileyo alunanto yakwenza nokuba lwenziwe kwiMac okanye kwiPC, enye into yindlela yokusebenza kwiqonga elinye okanye elinye. Kum, kukhululekile ngakumbi kwaye ndenza amaxwebhu alula usebenzisa iMac.
Andivumelani nokuba akunakwenzeka ukuba kwandiswe i-mac ngokubhekisele kwi-pc: kuxhomekeke kwimodeli ekhethiweyo.
Ubume bobugcisa sitsho
Kwaye ukuba sithetha ngokuziphatha kwabenzi, phi kwaye ngubani owenzayo? Kwaye kubaluleke kakhulu, iMac ifana neBang & edsen, bayila kuphela imeko, kwaye abanye bathenga amalungelo awodwa kuphela kwaye hayi rhoqo, kuba kwezona zithandwa kakhulu iinyanga ezintandathu.
Thenga ngokuziphatha uyeke ukukhohlisa, kunceda ngantoni ukuba yi-ecologist kwaye uthenge ikhompyuter eyenziwe kwelinye icala lehlabathi ngabantu abaxhaphazayo? Kwaye malunga nokuthanda imibala.
Yonke into ekufuneka uyazi malunga neefayile zefayile kuyilo lwegraphic